Best GZL150 akọrọ granulator emeputa na ụlọ ọrụ | Keyuan
Igwe ahụ na-anabata sistemụ inye nri okpukpu abụọ yana ụdị ọmarịcha cantilever, nke na-eme ka ihe ndị na-arụ ọrụ dị mma yana ọnụego ihe ịga nke ọma na ọmarịcha mmụọ.
A na -ejikarị ihe nlereanya a maka mmepe nke usoro onunu ogwu ọhụrụ nke Institute of Pharmaceutical Research, nke kacha nta n'ime usoro mmepe yana imepụta Chinesepreparations.Obere kacha nta nke igwe a bụ 500grams, nke bụ akụrụngwa akụrụngwa dị mkpa maka ọgwụ dị oke ọnụ ma dị nro. Na ụlọ ọgwụ, nri, kemịkal na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ojiji nke ihuenyo mmetụ kristal na teknụzụ njikwa dị iche iche iji melite mgbanwe na nchekwa nke ngwaọrụ ahụ.
Igwe ahụ niile bụ nke igwe anaghị agba nchara dị elu, yana mpaghara na-agagharị agagharị na-arụ ọrụ, nke na-achọpụta nrụpụta dị ọcha na emechiri emechi site na ntụ ntụ ruo granule, yana akụkụ kọntaktị niile nwere ihe dị mfe iji kesaa ma dị ọcha.
Nkwenye zuru oke na ihe GMP chọrọ maka mmepụta ọgwụ.
Ihe nkedo nke mmiri jụrụ oyi nwere ihe arụnyere n'ime maka mbata na ọpụpụ, yana ihe nnwale anaghị ekpo ọkụ na-emelite usoro mgbakwunye, nke na-emetụta ihe onwunwe.
Ọdịdị kwụ ọtọ nke ngwa nrụpụta ihe niile na -emezu ihe achọrọ maka usoro mmepụta, n'otu oge ahụ, a na -enwe ahụ iru ala chọrọ n'ọmụmụ ihe. Ọzọkwa, ọ na -eme ka ọ dịrị onye ọrụ mfe ịsakọta, hichaa ma ọ bụ mezie, n'otu oge ahụ, ọ na -ezerekwa ohere nke ihe egwu n'ihi ịdị elu, ma na -abawanye ihe nchekwa n'oge nkwasa, nhicha ma ọ bụ mmezi.
Nke gara aga: GZL120 akọrọ granulator
Osote: Gzl200 akọrọ granulator